छोराको हात कु’हि’ए’र झर्ने लागिसक्यो, उपचार गर्ने एक रुपैया छैन, छोरो पिठ्युँमा बोकेर च’न्दा माग्दै (भिडियो हेर्नुस) – live 60media
के के चाहिँ भो’ग्नु’पर्छ मान्छे भएर यो धर्तीमा जन्म लिइसकेपछी । क’ठै ब’रा ! एक साना बालक छ्न जसलाई क’रेन्ट लागेपछि उनको अबस्था अहिले एकदमै ना’जु’क रहेको छ, हात कु’हि’ए’र झ’र्न आटिसकेको छ उनको । यी नि’र्दो’ष
बालकले आखिर कुन पा’पको स’जा’य भो’ग्दै’छ्न, कापीकलम समाउने उनको हात सु’न्नि’एर कु’हि’एर झर्ने तरखरमा छ । आर्थिक अबस्था एकदमै क’म’जो’र छ, डाक्टरले हात का’ट्’नुपर्छ भन्दा अस्पतालमा बुझाउने पैसा नभएर दु’खा’इ अनि पी’डा खेप्दै हिड्दैछ्न यी बालक ।
गुल्मी जिल्लाको इस्मा नगरपालिका वडा नम्बर ६ सिमपानी नाम गरेको ठाउमा घर भइ बस्दै आएकि देशकुमारी कुमाल नाम गरेकी एक महिलाका रामबहादुर कुमाल नाम गरेका छोरा साथिसग खेल्दै गर्दा बिजुलिको पोलमा चढेछ्न र एक्कासि उनी
त्यहाबाट क’रेन्ट लागेर ल’डे’का रहेछ्न । आमा भने मेलामा रहिछिन, ह’त्त न प’त्त अस्पताल त लगिन आमाचाहिले तर कहि बेडको स’म’स्या, कहि उपचार नै नहुने भनेपछि उनले भैरहवा पुर्याइछिन छोरालाइ ।
एउटा ग्लुकोज मात्र चढाएको अरु उपचार केहीपनि नगरेको तर पैसा भने १६ हजार लिएको भन्दै गु’ना’सो गर्छिन उनी । पैसा सबै ऋ’ण काढेर लगेकी रहिछिन उनले । यत्तिका पैसा खर्च गरेर पनि के पाइन उनले, छोराको हात कु’हि’न आटिसक्यो,
उपचार गर्नको लागि पैसा चाहिने, निकै नै ठुलो स’म’स्यामा छिन उनी । पिठ्युँमा बि’रा’मी छोरो बोकेर च’न्दा उठाउदै हिड्दैछिन उनी, क’ठै ब’रा ! उनको अबस्था देखेर कसको चाहि मन न’दु’ख्ला र । बै’रिलाइ पनि यस्तो दु’ख नदिउन भगवानले ।
बिचरा बाबुको घाउको अबस्था एकदमै ना’जु’क हेर्नै नसक्ने अबस्थामा रहेको छ । हात पुरै सुन्निएको अनि कु’हि’न लागेको अबस्थामा छ, प’र’प’रै ग’न्हा’उ’न थालेको छ उनको पाकेको घा’उ । अस्पतालले पहिला धरौटी झुन्ड्याउनुपर्छ भनेपछी
उनी दिनरात पनि नभनी च’न्दा बटुल्दै हिड्दैछिन । २ ३ लाख रुपैयाँ चाहिने रहेछ धरौटी रकम । अस्पतालले हात का’ट्’नुपर्ने बताएको छ र तुरुन्त पैसा चाहिने भएपछि उनिहरु के गर्नु न के गर्नुको अबस्थामा छन ।
दिनभरी काम गरेर बेलुकी खाने उनको आर्थिक अबस्था एकदमै क’म’जो’र रहेको छ, पेट पाल्न मुश्किल परिरहेको अबस्थामा आखिर के आइलाग्यो उनिमाथी यो ? पेट पनि दु’लो परेको तर अहिले भने मलहम लगाएपछि टालिएको बताउछिन उनी ।
क’ठै ब’रा आफुले ना’ङ्गो तार समाएको र त्यसपछी के भयो केही थाहा नभएको बताउछ्न यि बाबू । भगवानरुपि सहयोगी मन भएका केही मान्छेहरुलाइ उनलाइ तिस हजार रुपैया सहयोग पनि गरेका छ्न ।
← चटपटे पानीपुरी बेचेरै सैनिक पत्त्निले कसरी जोडिन काठमाडौमा घर र ३ गाड़ी
एमालेकी नेत्री लिएर बाउ फ’रा’र,बिचल्ली र श्रीमती,न्याय खोज्दै मिडियामा(भिडियो हेर्नुहोस्) →